Nhau - ina dzakakosha mabasa eakadzika midzi mune yakakwira-yekumhanyisa njanji tunnels mukugadzira tunnel
Kutanga, iyo pre-yakavigwa chiteshi cheiyo-inomhanyisa njanji tanera inogona kusimbisa maviri-masenduru lining uye panguva imwechete, inogona kuve neyakaenzana yakazara simba kuita, uye kune akawanda maficha eesimba panguva yekumanikidza maitiro. Chinhu chakakosha kuve neyunifomu simba. kushanda. Inogona kuvandudzwa mukupindura kuneta.
Chechipiri, kune zvakawanda zvakanakira nzira dzakadzamidzirwa mumatanho echitima chechitima. Chimwe chiitiko ndechekuti ine yakanaka moto kuramba, ndokuti, pasi pekupisa kwakanyanya, kazhinji haina kuchinja zvakanyanya.
Chechitatu, chinangwa chikuru cheiyo yakadzamirwa mugero weiyo-yekumhanyisa njanji tanera ndeyekudzivirira iyo catenary kubva kudonha, kunyanya kusatendera iyo catenary kuwira muchitima, zvikasadaro nhevedzano yezvinetso zvine njodzi zvichasangana. Kunyanya mune yekurembera makoramu, yakanaka yekuisa chaiyo inofanirwa kuve nechokwadi.
Uye zvakare, mukugadzirisa kwekurongedza mhete, iyo pombi yakavigwa chiteshi zvakare iri nyore kwazvo.
Ndizvozvo chaizvo nekuda kwezvakanaka izvi izvo zvakadzamidzirwa mapaipi emapaipi akave akagadzirwa zvakanyanya mumatiraki emhando yepamusoro-soro. Nekufambira mberi kwesainzi yesainzi uye tekinoroji, zvinodiwa nevanhu zvehunhu hwepombi yakadzamidzirwa migero iri kuramba ichikwira nekukwirisa. Kana ivo vachida kuramba vachisangana nezvinodiwa nevatengi, vagadziri zvakare vane zvinodiwa zvekuita kwechigadzirwa mukugadzira nzira dzepombi dzakadzika midzi. Mukuenderera kunatsiridzwa, mhando yacho inofanirawo kudzorwa zvakanyanya. Kubudikidza nekuenderera mberi nekutsvaga uye kudzoka kwemakambani kudiwa, isu takagadzira pre-yakadzamidzirwa migero yemhando yakakomberedzwa pombi mapaseji epasi pevhu neepamusoro-kumhanya njanji migero.